လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျး(ကြိုကျလတျမွို့နယျ(ကြေးရှာ) – Than Lwin
သံလှငျနိုငျငံသားစှမျးရညျမွှငျ့အဖှဲ့ကစီစဉျသညျ့ ကောငျးမှနျသောဒသေန်တရစီမံအုပျခြုပျမှုတှငျ နိုငျငံသားမြားပူးပေါငျးပါဝငျမှုအခနျးကဏ်ဍမွှငျ့တငျရေးစီိမံခကျြ(ဖြာပုံခရိုငျ/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖွဈ (ကြိုကျလတျမွို့နယျ၊ အစုကွီးကြေးရှာ၏ အစုကွီးရှာမ၊ ကြုံမငေး၊ ဆှတေျောစု ကြေးရှာအုပျစုမြား။ ကွံခငျးပနျးပဲစုကြေးရှာ၏ ကွံခငျးပနျးဘဲစုရှာမ၊ စကျကုနျး၊ ကြုံပိုငျး ကြေးရှာအုပျစုးမြား။
ရုံးဒေါငျ့ကြေးရှာ၏ ရုံးဒေါငျ့ရှာမ၊ သဲကုနျး၊ ဗလီခြောငျကြေးရှာအုပျစုမြား)အတှငျး လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျးအစီအစဉျကို ( ၃. ၁၂. ၂၀၁၉ မှ ၈. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၅ ရကျတာဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ ၎င်းငျး စဈတမျးကို ဖြာပုံခရိုငျအတှငျးရှိမွို့နယျမြားဖွဈသော ကြိုကျလတျ၊ ဘိုကလေး၊ ဒေးဒရဲနှငျ့ဖြာပုံမွို့နယျမြားနှငျ့ ကြေးရှာမြားတှငျ ကောကျယူသှားမညျဖွဈပွီး၊ ကြိုကျလတျ၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖြာပုံနှငျ့ ဘိုကလေးကြေးရှာတို့တှငျကောကျယူပွီးစီးခဲ့သညျ။
ယခုစဈတမျးကိုကောကျယူရာတှငျ ရောငျနီဦးအမြိုးသမီးဖှံ့ဖွိုးရေးအဖှဲ့ဝငျမြားကတကျကွှစှာပူးပေါငျးပါဝငျကူညီပေးခဲ့ကွပါသညျ။ စဈတမျးကောကျယူရာတှငျ ကူညီပေးခဲ့ကွသော ဒသေခံပွညျသူမြား၊ ရောငျနီဦးအမြိုးသမီးဖှံ့ဖွိုးရေးအဖှဲ့နှငျ့ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျခဲ့ကွသူမြားအား အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ အစုကြီးကျေးရွာ၏ အစုကြီးရွာမ၊ ကျုံမငေး၊ ဆွေတော်စု ကျေးရွာအုပ်စုများ။ ကြံခင်းပန်းပဲစုကျေးရွာ၏ ကြံခင်းပန်းဘဲစုရွာမ၊ စက်ကုန်း၊ ကျုံပိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုးများ။
ရုံးဒေါင့်ကျေးရွာ၏ ရုံးဒေါင့်ရွာမ၊ သဲကုန်း၊ ဗလီချောင်ကျေးရွာအုပ်စုများ)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ( ၃. ၁၂. ၂၀၁၉ မှ ၈. ၁၂. ၂၀၁၉၊ ထိ ) ၅ ရက်တာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်များဖြစ်သော ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များနှင့် ကျေးရွာများတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံနှင့် ဘိုကလေးကျေးရွာတို့တွင်ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သည်။
ယခုစစ်တမ်းကိုကောက်ယူရာတွင် ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များကတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Previous Post: လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျး(ဘိုကလေး(ကြေးရှာ)
Next Post: လူထုသဘောထားအမွငျစဈတမျးကောကျယူခွငျးဖြာပုံမွို့နယျ/ကြေးရှာ(19- 24. Dec,2019)